Abavelisi bokuZivavanya kunye nababoneleli-ifektri yokuzivavanya ngehoseyile
I-SARS-CoV-2 IgG/IgM yoVavanyo oluKhawulezayo ikhasethi yi-lateral flow chromatographic immunoassay yokufumanisa umgangatho we-IgG kunye ne-IgM antibodies kwi-SARS-CoV-2 kwigazi lomntu lonke, i-serum okanye isampuli yeplasma.
Ephathekayo i-SARS-CoV-2 ye-Antigen Rapid Self Self Kit
I-Portable SARS-CoV-2 Antigen Rapid Self Test Kit epakishwe ngeebhegi, kulula kakhulu ukuyiphatha xa uphuma, ilungisa ukusetyenziswa kwendawo, kwaye yonga iindleko zokuthumela ngenqanawa ngexesha lokuhamba.Iikhithi zokuzivavanya ze-antigen zokuhamba nazo ziluncedo kakhulu.
I-Rapid Antigen Self Cassette yoVavanyo lwe-Covid 19
ISO13485 isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho, i-CE iphawulwe
Umenzi wekhasethi onamava wovavanyo lwe-antigen ekhaya
Isiphumo sinokufundwa kwimizuzu eyi-15
Uvavanyo lweSelf Antigen lwe-COVID-19 CE luvunyiwe
Olu vavanyo lwe-self-antigen lwe-CE Luvunywe ngokuphelelwa kweenyanga ezingama-24
Usetyenziso: Funda incwadana yemiyalelo ngononophelo phambi kokuba wenze uvavanyo.
Imiyalelo yokuGcina: Gcina kwindawo epholileyo, eyomileyo & kude nelanga elithe ngqo, kunye nokufuma
Umthamo wemihla ngemihla ye-1 yezigidi zovavanyo
I-immunoassay ethembekileyo nekhawulezayo ye-chromatographic yokufumanisa umgangatho we-SARS-CoV-2-i-antigens ethile ekhoyo kwi-nasopharynx yomntu, ibonelela ngokukhawuleza ukuxilongwa kwekiti ye-antigen kwimizuzu, kulula ukuyisebenzisa, kulula ukuyitolika, iziphumo zinokutolika kwimizuzu eyi-10.
I-SARS-CoV-2 ye-Rapid Antigen Self Kit eneemvavanyo ezi-2
I-COVID-19 Antigen Test Cassette luvavanyo olukhawulezayo lwe-chromatographic immunoassay yokufunyaniswa komgangatho we-antigen ye-COVID-19 kumzekelo we-nasal swab ukunceda ekufunyanisweni kosulelo lwentsholongwane ye-COVID-19. iCE iphawulwe.
UVavanyo oluKhawulezayo lwe-COVID-19 lwe-Self Antigen luvavanyo lokuxilonga kwi-vitro lokubona umgangatho wenoveli ye-coronavirus antigens N protein kwiswabhu yeempumlo zomntu.I-Fanttest ibonelela ngekiti yokuzivavanya ye-covid 19 ye-antigen ukuze uyisebenzisele umntu ngepakethi enye.